Ezikhathini ezibandayo, abantu abaningi baqala ukubhekana nezinkinga ngomphimbo: kuphuka phansi, ngakho-ke ama-aches, noma ngisho nama-angina ahlasela lowo muntu. Kodwa iqiniso liwukuthi lokhu kungenzeka kuphela ebusika noma ekwindla, abantu abaningi bahlushwa yi-angina ngisho nasehlobo.
Ngokuqinisekile wonke umuntu uyazi ukuthi i-angina ingakanani: izinga lokushisa ngama-degrees angu-40, ubuhlungu obuqine kakhulu emqaleni, ukungakwazi ukukhuluma igama elilodwa kanye nesilwane sendle.
U-Angina ukuvuvukala kwama-glands
U-Angina yisifo esithathelwanayo esinezibonakaliso zasendaweni zendawo (umkhuhlane, ukubhubhisa, ukubomvu) nezimpawu ezijwayelekile zokungabekezelelani (ukushaya, ukulahlekelwa ukudla, umkhuhlane kanye nobuthakathaka).
I-angina ye-Classical yi-inflammation ye-glands, okungukuthi, i-palatine mandible. Kodwa-ke, emgodini womuntu (igama elibizwa ngokuthi i-anatomical) kunezinhlobo ezine-lymphoid - zinezicubu zellymatic. Lokhu kufaka phakathi: ama-tonsil angama-lingu (asezindaweni ejulile emphethweni ngolimi), izimila ze-adenoid (i-adenoids ezisekujuleni kwempumphu) kanye nama-dvenubarnye amathani (amathisini e-lymphatic ngasekuqaleni kwe-tubes yokucwaninga, yibo "abathintekayo" nge-indlebe ukuvuvukala, ezindizeni nasolwandle) .
Ukuqoqwa okwehlukana kwezicubu ze-lymphoid kuyindonga yangemuva ye-pharynx ngaphansi kwekhanda elimangalisa, linokubonakala kwamazinyo.
Zonke lezi zixuku ze-lymphatic zitholakala nxazonke zendilinga futhi ziyi "balindi bomngcele" wokutheleleka.
Isakhiwo esiyinkimbinkimbi kunazo zonke ekusetshenzisweni nokuthakazelisa yiqiniso, yiqiniso, amathoni - amathoni abantu. Bamele ukuqoqwa okwakhiwe ngamaseli lymphatic ezinhlangothini ze-pharynx phakathi kwama-arcs we-palate elithambile. Amathani ayinkimbinkimbi kakhulu esakhiweni sabo. Uma ubheka eduze kwabo, ungabona imigodi. Lezi zigobe ziyi-lobules zamathoni ezinamafutha.
Ukuze ukwazi ukucabanga ngesakhiwo sangaphakathi somoya, cabanga ngomfula iVolga phambi kwakho. Lo mfula omude, onamanzi amaningi, ugeleza oLwandle lwaseCaspian, futhi indawo lapho ugeleza khona kuthiwa i-dale (estuary) yalomfula. Ngakho-ke, uma siqhathanisa, i-lacuna yi-delta, siqhathanisa ama-arecus ne-tributaries anezikripthi ezijule kakhulu kumathoni. I-crypt ihunyushwa kusukela kwisiLatini ngokuthi "ifihliwe". Ama-crypts namanje anjengezimpande zezihlahla, ezikhula emhlabathini. Eduzane nalezi zikhalazo zikhula ngama-lymphocyte-amangqamuzana, aphethwe yisandulela-ngculazi somuntu.
Kungani abantu badinga okuningi?
Zonke izicubu ze-lymphatic, lapha zihlanganisa futhi i-palintine mintelins, edalwe ukulwa nama-microbes angena emvelweni. Siphefumula emoyeni, kodwa ngesikhathi esifanayo, ama-microbes angena emzimbeni wethu noma siwaxube kanye nokudla. Ama-microbes ahlala embranini emangcwabeni ye-nasopharynx noma i-pharynx. Ama-lymphocyte aqaphela ngokushesha ama-microbes futhi aqala ukukhiqiza ama-molecule, ama-antibodies, okugcina ekubhubhiseni. Ngokwemvelo, lokhu kuyindlela elula yokuthuthukiswa kwengculazi.
Ukuvikelwa komzimba omzimba kuyinkimbinkimbi yonke yamagciwane kanye nezinye izinto eziwusizo ezilwa nama-virus, ama-microbes, futhi zakha umntwana ekukhuleni nasekubuntwaneni. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuba nazo zonke izitho ze-lymphoid, ikakhulukazi emntwaneni.
Uma sikhula, noma kunalokho, uma kunokukhubazeka ngokocansi, izicubu ze-lymphoid azibaluleki kangako kithi, ngoba ukuvikelwa ngokumelene nokutheleleka sekuvele kwakhiwe. Ama-lymphocyte ekugcineni ashiya amathoni nezinye izilonda ze-lymphoid, izicubu ezihlangene zivela khona, amathoni abe amancane futhi ngezinye izikhathi aze aphele. Yile ndlela okwenzeka ngayo izicubu ze-atrophylymphoid.
Kodwa-ke, konke esikuxoxile kakade, kusebenza kuphela kubantu abanokuzivikela okuqinile futhi okunempilo. Kodwa wena uyazi ukuthi nsuku zonke abantu abanempilo bawela kancane, ngenxa yalesi simo semvelo esibi, imikhuba emibi, ukudla okungenampilo, ukwelashwa okungalungile nokucindezeleka okuqhubekayo. Izinqubo zomzimba ziba buthakathaka futhi zihlale zihlala isikhathi eside, futhi ngenxa yalokho, izifo zivela. Ngokunciphisa ekukhutheni, umuntu uthuthukisa i-angina ne-tonsillitis engapheli.
U-Angina uvame ukuvela ngenxa yehlobo oluthile lwe-streptococcus. U-Angina ubonakaliswe ama-otkomnebnyh amathani nokubomvu. Konke kuncike kuhlobo lwe-tonsillitis kuma-tonsils, kungaba khona ukuhlasela kuwo wonke ama-tonsils, futhi kungaba kuphela ku-lacunas. Noma kunalokho, ukusho ukuthi ifomu kanye nokuba khona kwale plaque kunquma uhlobo lwe-angina.
Njengoba kushiwo ngaphambili, uphawu oluqhakazile lwendawo luyisifo somzimba, ngenxa yokuthi umuntu akakwazi ukugwinya amathe, ukukhuluma, ukuphuza nokudla.
Ngokuvamile ngesikhathi sokugula noma ngokushesha ngemuva kokuba kube nezinkinga ezinkulu: ukuvuvukala kwemisipha yenhliziyo, ukulimala enhliziyweni, ukubhujiswa kwamagagasi enhliziyo, ukuvuvukala kwamalunga. Uma udokotela ekutshela ukuthi udinga ukuhlala futhi uphathwe isikhathi eside, uyakhathazeka ngokuthi lezi zinkinga zingavela. Ungacabangi ukuthi uzoyicela, landela izincomo zodokotela.
Kubalulekile ukuphathwa kabi
Okokuqala, okudingayo ukwenze ukuhlukanisa isiguli, khumbula ukuthi umkhuhlane wesifo udluliselwa ngamaconsi amancane - ngokubanga, ukukhwehlela kanye nesigqoko.
Okulandelayo, kufanele uqinisekise ukuphumula kombhede okhukhulayo ngesikhathi somkhuhlane, kanti kukhona ukushisa komzimba okuphakeme, bese kwenye indawo ngesonto leviki udinga ukuhlala kwimodi yasekhaya (ngaphandle kokuthi wena wafaka esibhedlela).
Futhi owesithathu - njalo udinga ukuphuza iziphuzo ezifudumele: itiye noju, i-lemon ne-raspberries, i-infusions kanye netiyi le-herbal (iSt John's wort, chamomile).
Ukuze ukwazi ukugwinya ngokuvamile, thatha ama-painkillers aqukethe i-paracetamol - iTylenol, i-Efferalgan, i-Panadol.
Futhi into ebaluleke kakhulu imithi yokwelapha. Imithi ephumelela kunazo zonke yinkomfa ye-penicillin nama-macrolides. Kudingeka ukuthatha ama-antihistamine ukunciphisa i-edema yendawo kanye nokusebenza ngokuphindaphindiwe komzimba.
Izinkinga eziyingozi empilweni
I-tonsillitis engapheli ingakuholela ezinkingeni ezisongela impilo: ukuxhaswa ekujuleni, ukuxhaswa ekujuleni kwenhlanzi elithambile ngemuva kwe-palatine tonsil, kanye nokuqhuma phakathi kwemisipha yentamo eceleni kwe-slits kungangena emthombeni. Kumelwe kuthiwa lesi sigaba siyizinkinga ezingavamile kakhulu. Kodwa-ke, izinkinga ezisele zenzeka kaningi, kanti umuntu angakwazi ukubona ukuthuthukiswa kwawo. Ngokushesha ngemva kwe-angina noma phakathi naso kunomphimbo oqinile onomlomo ngakolunye uhlangothi, ngoba ngokuvamile izinkinga zingukubonakaliswa okukodwa. Futhi, izinga lokushisa liyakhula, emva kwezinsuku ezingu-3-4 isiguli singakavuli umlomo wakhe, akunakwenzeka ngisho nokufaka isipuni se-cereal emlonyeni wakhe.
Ezimweni ezinjalo, udinga ukubiza ngokushesha i-ambulensi ukusebenza esibhedlela.
Ngidinga ukususa amathoni kumuntu omdala?
Ngezinye izikhathi isiguli nodokotela babhekene nombuzo onzima kakhulu: "Ngidinga ukususa amathani?"
Eqinisweni, uma umuntu eba nezinkinga: ukukhubazeka kwenhliziyo kuqala ukwakha, ukuxhaswa kwenzeka entanyeni, i-arthritis noma i-glomerulonephritis iqala, ngakho-ke amathoni ayadingeka ukuba asuswe ngokungathandeki hhayi kuphela ngabantu abadala, kodwa futhi nezingane.
Kodwa-ke, kwenzeka ukuthi umuntu uphinde wabuyiselwa futhi awunaso izinkinga, kodwa ubuhlungu obubuhlungu buvela njalo kaningi, umphimbo uvunguza kancane, iphunga elimnandi livela emlonyeni, izoni eziningi, i-otitis ne-pharyngitis zivela. Udokotela nesiguli baqala ukuzindla, badinga ukususa amathoni noma cha.
Kulesi simo, futhi, kukhona izibonakaliso ezicacile: uma izifundo ezimbalwa zokwelapha okuzimele zihlulekile futhi izimpawu zingapheli, khona-ke kudingeka udedwe amathoni.
Ngidinga ukususa ingane yami?
Lona futhi umbuzo onzima kakhulu: khumbula ukuthi ekuqaleni saxoxa ukuthi ingane idinga kangakanani izicubu ze-lymphoid ukuze kugonywe ingculazi. Kulesi simo, isiguli sizama ukufinyelela ingane ngaphambi kokukhulelwa ngosizo lwezokwelapha okuzenzekelayo. Usizo oluhle kakhulu izidakamizwa ze-homeopathic. Kuhle ukubonisana nomntwana onomuntu ochwephezela ekhaya.
I-homeopath ilawulwa ngabanye.
Isikhathi esiningi ingane, lesi sifo sivele "siphelele." Kodwa-ke, uma kukhona izinkinga ezihambisana nezinkinga: ubuhlungu ezinhliziyweni, izinhliziyo, amalunga nokuningi kwalokho, izifo ziyatholakala, bese ususa ngokuphuthumayo amathoni, cabanga ngempilo yengane yakho.
Uma i-amygdala ikhuphuke ngokuphawulekayo, ivame kakhulu kwenziwa "ngokusika izibani".
Izakhiwo eziwusizo zehisopi ezosetshenziswa emithi yokwelapha
Ukungabi nensimbi emzimbeni womuntu
Ukungabi nalutho: izikhambi zabantu
Izifo zemilenze nezinzipho, ukwelashwa
Impande yeBurdock: izindawo zokwelapha nesicelo
Ukuhlinzwa kwePlastiki yama-labi minora minora: izinkomba, ukuphikisana
I-Patties enenkukhu namazambane
Ama-Chips, i-soda nezinye ukudla okulimazayo
Isaladi kusuka ku-Peking iklabishi ngesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
Ukukhulisa indodana ngomoya onjengoba yimpi
Imilenze yamantombazane enhle kunabo bonke
Ngingadla emva kwamahora ayisithupha?
Jamu kusuka kumahlumela ephayini
Imithetho yokugcina isibalo siphezulu
Ngiyakuhalalisela ngoSuku Lomndeni evesini, i-SMS nezithombe kumama, abababa, amadoda. Usuku lomndeni nothando - izinkondlo kanye neprose
Umkhwa uphupha ngani? Izincazelo ezincwadini ezahlukene zokuphupha
Indlela yokusetha umgomo uphumelele
Ama-candies asebusuku avela ku-NIKI
Isithombo nge ukhilimu omuncu
Ukunakekelwa kwezinwele nezinwele
UDaria Pynzar wayenamahloni nge-swimsuit yakhe, isithombe
I-Horoscope ngoJanuwari 2018 - owesifazane-Amapisisi - avela kuTamara Globa no-Angela Pearl